Ukulandelwa kweBlog: Uqeqesho lweBlog yam nguShonnie Lavender | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 21, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kutshanje ndibonelele iingcebiso zebhlog kuShonnie Lavender yebhlog yakhe emnandi, Umqeqeshi webhlog yam. UShonnie walithathela entliziyweni eli cebiso kwaye ngoko nangoko waqala ukusebenza ukuze enze ezinye zeenguqulelo. Okona kubalulekileyo yintloko yekhasi kwibhlog yakhe.
Nantsi umzobo 'wephambi' kwentloko:
Nantsi umzobo 'we-header' Emva ':
Ngethemba, uyayibona indlela ekumema ngayo umzobo omtsha! Wowu! Olunjani lona utshintsho. Ifoto inobuhlobo kwaye iyamema kwaye utyikityo longeze kongezelelekileyo kwiklasi. Umxholo kaShonnie sele ungaphezulu - olu lwakhiwo lutsha lunobuhlobo kakhulu. Uninzi lweebhlog ziyangcangcazela ngokubeka imifanekiso yazo kwiibhlog zazo. Khumbula, umfanekiso awukho kuwe! Yenzelwe abantu abanxibelelana nawe ngebhlog yakho!
Umsebenzi omkhulu uShonnie! Nceda ugcine usivavanye ukuba ikhula kakuhle kangakanani na!
Ukuba ungathanda ukufumana ibhlog yakho incamatheliswe, funda kum Iposti yeBhlog.
Ucofa uHlaziyo lweWebhu uyaphinda!
Jul 21, 2007 ngo-7: 15 PM
Ngokwenene ngokwenene luphuculo olo. Ngoku ndingatshintsha uhlobo lochwethezo lube yinto ethe cwaka, elula.